Rubber Liners Yekutakura Rori
SAG / AG / Ball / Rod / hwokugaya hwakabvira Rubber Liners
Ceramic Yakarongedzwa Rubber Hose
Usazviomesera Rubber Hose
Polyurethane Yakarongedzwa Simbi Pipe
Rabha Lined Steel Pipe
Vibrating Screen Midhiya
Polyurethane Yakanaka Screen Mesh
Polyurethane Kuongorora Midhiya
Rubber Kuongorora Midhiya
Flotation Pfeka Zvikamu
Rabha Rotor & Stator
Usazviomesera Metal Hose
Metallic Kuwedzera Mapfundo
Rubha Kuwedzera Mapfundo
Sefa Dhinda Zvishongedzo
Pfeka Resistant Track Mapedhi
Conveyor Mabhandi & Rollers
Yakagadziriswa Rubber & epurasitiki Zvikamu
Rabha Stator Uye Rotor Of ...
Anotakura mabhandi Bhandi rekutakura ndiyo simbi yekutakura bhandi rinotakura (rinowanzo kupfupiswa kuenda kubhandi rinotakura). Iyo bhandi inoendesa system ndeimwe yemhando dzakawanda dzeanotakura masisitimu. Bhandi rinotakura bhandi rine maviri kana anopfuura mapuru (dzimwe nguva anonzi madhiramu), ane chiuno chisingaperi chekutakura svikiro - bhandi rekutakura - rinotenderera pamusoro pavo. Imwe kana ese maviri emapuleti anofambiswa, kufambisa bhandi uye izvo zvinhu zviri pabhandi kumberi. Iyo powered pulley inonzi iyo drive pulley whil ...
Polyurethane yakamisirwa simbi pombi ndeye yakakwira kupfeka inodzivirira pombi chigadzirwa, icho chinoshandiswa zvakanyanya mune chicherwa kugadzira mapaipi uye tailing yekuendesa mapaipi. Mafuta emafuta emagetsi anoshandisa pombi yemarasha nekubvisa madota masisitimu, pamwe nemafuta, makemikari, simende nemaindasitiri ezviyo. Zvimiro 1. Wear-resistant 2.Prevent Scaling 3.Corrosion Resistance 4. Resistance to hydrolysis aging 5. High Elasticity 6. Resistance to Mechanical Shock 7. Self-lubrication Arex inosarudza prem ...
Rabha Stator Uye Rotor Of Flotation Machine
The stator uye rotor, ainyanya kushandiswa flotation muchina XJK akatevedzana, XJQ akatevedzana, SF akatevedzana, BF akatevedzana, KYF akatevedzana, XCF akatevedzana, JJF akatevedzana, BS-K akatevedzana. Iyo rotor uye stator yemuchina wekutsikisa unowanzo nyorwa nesimbi masaga maficha uye anopfeka-asingagadzirike rabha. Metal skeleton inoisa inoitwa neyemberi murazvo yekucheka uye wozowirirwa nenzira kwayo pasi pesimba maitiro maitiro. Iko kusimba uye kuenzanisa mashandiro emasaga akaiswa zvinovimbiswa nekuyera kuona kuburikidza ...
Hydraulic Fittings & Kurumidza Kubatanidza & Chikafu-Kiyi Adapter & Hydraulic Rubber Hose
Chikafu & maadapter ekuvhara Arex yakanangana nekuwana kugona mukugadzira, kugadzira uye kupa mhinduro dzemvura inoyerera, zvinoriumba nemidziyo inosanganisirwa yekumanikidza kwakanyanya hydraulic kunyorera. Dzakatenderedzwa mukati meizvi, inyanzvi, inogadzira maadaputa anokosha uye mavharuvhu ebhora anoshandiswa zvakanyanya mukuchera kwepasi pevhu. Zvidimbu zvekubatana chikamu chakakosha cheiyo hydraulic wedunhu mumigodhi uye ine yakaratidza track rekodhi yekuve yakanyanya kunaka sarudzo kune c ...
Ese mapedhi edu akagadzirwa nevashandisi vekupedzisira mundangariro, tarisiro yakaiswa pahunhu uye negoho. Iwo maPads 'profiles anofanirwa kukwana zvakakwana shangu yako yetraki kuitira kudzivirira kufamba kusiri madikanwa uko kunogona kutungamira kukuunganidzwa kwemarara, izvo zvinogona kuunza kushushikana kumapads ako nokudaro zvichipa kusimba kuri nani. Kukwana kwakaringana zvakare kunoreva kunyarara kunoshanda ruzha. Isu tinopa polyurethane track pads uye yerabha track pads yevatengi vanoshandisa, ayo ane kusakara kukuru kupfeka uye ngura kuramba ...
Metallic Kuwedzera Majoini & Mvuto
Ndezvipi Kuwedzera Majoini? Masoja ekuwedzera anoshandiswa muhurongwa hwepombi kutora kupisa kwekushisa kana kufamba kwekupedzisira uko iko kushandiswa kwekuwedzera zvishwe zvisina kunaka kana zvisingaite. Masoja ekuwedzera anowanikwa mune akasiyana maumbirwo uye zvigadzirwa. Chero pombi inobatanidza mapoinzi maviri inoiswa pasi pemhando dzakawanda dzezviito izvo zvinokonzeresa kusagadzikana kwepombi. Zvimwe zvezvikonzero zvekushushikana uku zviri zvemukati kana zvekumanikidza zvekunze patembiricha yekushanda. Kurema kwepombi pachayo uye pa ...
Kuparadzanisa majoini anotora danho rekugadzirisa dhizaini yemapaipi nemavharuvhu. Iwo anokosha anobatsira panguva yekumisikidza uye kubviswa kwepombi zvikamu nemavhavha. Pasina chidimbu chakabvaruka chinopa kureba kwekugadzirisa, zvinenge zvisingaite kuisa vharuvhu muchikamu chepombi. Kutenda kuchinjika uku kwekupwanya kubatana, vharafu inogona kuiswa padhuze nepaburi rekubvarura, uye iyo yekubatanidzira inogona kuve yekumisikidza kune chaiyo kureba kunodiwa prio ...
Polyurethane Stator Uye Rotor Ye Flotation Machine
The stator uye rotor, ainyanya kushandiswa flotation muchina XJK akatevedzana, XJQ akatevedzana, SF akatevedzana, BF akatevedzana, KYF akatevedzana, XCF akatevedzana, JJF akatevedzana, BS-K akatevedzana. Iyo stator uye rotor ndizvo zvepakati zvinoriumba zvemuchina wekutenderera, unonyanya kushandiswa mukubatsira simbi kana isiri-simbi. Polyurethane stator uye rotor ndezverumwe rudzi nemishonga inodzivirira kuti flotation muchina pamwe nevakawanda zvivakwa, sezvo polyurethane ine simba rakakura sepurasitiki uye seyakareba simbi. Yakakosha zvinhu zvigadziriso ...
Yakagadziriswa Rubber & Plastiki Zvigadzirwa
Kugadzirwa kwetsika kwerabha uye zvigadzirwa zvepurasitiki Zvakajairika maitiro ekugadzira iyo yekugadzira yerabha sezviri pazasi https://www.arextecn.com/uploads/66f24654.mp4 Raw zvinhu-zvinosanganisa-roll extrusion-kuumba uye vulcanization-kuumbiridza Akasiyana emhizha kugadziriswa kwepurasitiki zvinhu sezviri pazasi Jekiseni kuumbwa; (epurasitiki hombe zvikamu) Furidzira kuumbwa; (mabhodhoro epurasitiki) Kutora kwepurasitiki; (firimu repurasitiki rakaumbwa) Kuwedzeredzwa; (epurasitiki pombi) Kushanda ruzivo Tinosimudzira mazano ako kuti azadzikiswe mukati mekuedza ...
Usazviomesera Slurry Rubber Hose
Iyo inochinjika slurry yerabha hosi inosanganiswa neNR, BR uye SBR yakakomberedzwa yerabha. Iri kushandisa yakasimba micheka yesimbi machira ane simbi mhete semabhonzo ekusimbisa. Iyo inochinjika yerabha hosi inogara ichiiswa mukati pakati pepombi uye yekucheka iyo iyo dredger, iyo inotakura isina kushanda kushanda kumanikidza panguva yekuyamwa nzira yeslurry. Iyo inochinjika yerabha hosi & Yakavharirwa pombi, ine HB simbi mhete mukati, yakakodzera kutamisirwa hasha slurries, zvicherwa kugadzira zvirimwa, t ...
Iyo ceramic yakarongedzwa hosi yerabha iri kushandisa mune ine hukasha mamiriro apo iyo yakajairwa isina kukamurwa yerabha hose inoda kugara ichichinjaniswa. Zvakare, zvedongo yakarongedzwa hosipaipi hosi inogona kuiswa kune imwe mhando yemichina yekudengenyeka kana neimwe isina-mira michina. Inogona kuwedzera kusarudzwa kweinjiniya vane nzira dzakapamhama dzekuisa uye kushanda. Zvimiro 1. Pfeka kuramba. Kupfeka kwesimbi yekramiki yakakomberedzwa pombi yerabha kwakapetwa kagumi kupfuura kweyakajairwa simbi pombi.
Sefa Dhinda Muchina Zvikamu
AREX indasitiri inopa huwandu hwesefa yekutsikirira vezvenhau kuti vawedzere kuita kwakawanda kweiyo firita yako yekudhinda system. Sefa muchina wekudhinda unoshandiswa kune mvura / yakasimba basa rekuparadzanisa. Mafirita ekumanikidza anoshandisa kumanikidza kusefa kupatsanura zvinwiwa uye zvakasviba, umo iyo slurry inoputirwa mupepanhau remafirita uye kupera mvura pasi pekumanikidzwa. Chaizvoizvo, yega yega yekudhinda firita yakagadzirirwa zvinoenderana nesaizi uye mhando yeslurry inoda kushayiwa mvura. Zvikamu zvina zvakakosha zvefaindi yekudhinda zvinosanganisira ...
KeroChikamu 505, D-block, MCC Grand Plaza, Jianhua Street, Yuhua Ruwa, Shijiazhuang Guta, Hebei Province, China